Zava-dehibe ny antsipiriany! Fitsaboana tsy mety any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra | Orinasa Mpampanoa lalàna
Isaky ny vaksiny ao Dubai na UAE sy ny fanafody fanafody eny an-tsena dia tsy maintsy mandeha amin'ny dingana fankatoavana henjana ataon'ny governemanta alohan'ny hamarenany ny besinimaro.
"Ny fitsaboana dia siansa tsy azo antoka ary zavakanto azo inoana." - William Osler
Araky ny fantatrao, ny fanararaotana ara-pitsaboana dia midika fa hadisoana ara-pitsaboana mitranga satria tsy nahazatra ny lafiny teknika, na vokatry ny tsy fitandremana na tsy fahampian'ny ezaka matihanina.
Miaraka amin'ny fotoana isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, ny Governemantan'ny Emirà Arabo Mitambatra dia nifantoka tamin'ny zava-misy fa ny Arabo eo an-toerana, izay misolo tena ny sarimihetsika ao amin'ny firenena dia mitady safidy fitsaboana ara-pitsaboana tandrefana. Ny antony dia nesorina tsy ho voafehin'ny safidin'izy ireo any amin'ny fireneny izy ireo. Midika izany fa zavatra tsotra iray - tsy dia nanana raharaham-barotra lehibe ny firenena.
Fitsaboana maloto any UAE
Tamin'ny taona 2008, ny governemanta ny United Arab Emirates dia nanambara ny lalàna momba ny Medical Liability, izay nantsoina hifehy ireo lafin-javatra manokana mifandraika amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny olana momba ny fifandraisan'ny dokotera.
Raha ny tranga tany am-boalohany momba ny fanararaotana ara-pitsaboana ao UAE dia fehezin'izy ireo amin'ny fanomezana ny code Civil UAE - Lalàna federaly № 5 hatramin'ny 1985. Ankoatra izany, ny fitakiana voalaza momba ny fanararaotana ara-pitsaboana any UAE ihany koa dia azo fehezina. avy amin'ny fehezan-dalàna Penal - ny lalàna federaly as 3 hatramin'ny 1987.
Na izany aza, tsy ela dia nanjary niharihary fa ny lalàna efa misy dia feno vokatra mifanohitra sy fanapahan-kevitra mamitaka. Izy io dia nanjary fototry ny fandikana lalàna vaovao, izay azo antoka fa hanatsara ny lafiny ara-dalàna mifandraika amin'ny sehatry ny fitsaboana amin'ny ankapobeny. Tsy ho ela, ny fametrahana ny lalàna vaovao dia nanefa sazy vaovao sy hetsika ara-dalàna vaovao momba ny fanagadrana azy roa hatramin'ny dimy taona, ary mitaky onitra 200.000 AED hatramin'ny 500.000 AED. Araka izany, ny lafiny rehetra momba ny rafitra ara-dalàna mifehy ny mpitsabo amin'ny mpisolovava sy ny mpisolovava mpanohitra any UAE, ary koa mpisolovava mpamono olona ao Dubai, indrindra, dia nanjary jadona tamin'ny toe-javatra vao noforonina.
Raha jerena dia jerena ny marary, misy ny olana lehibe raha ny momba ny fepetra omen'ny fanjakana tsy ampy taona. Mipetraka ny olana satria tsy misy antom-bolo ampy ho an'ireo mpitsabo milaza fa ny marary nomena dia tsaboin'ny dokotera teo aloha. Marobe ny olona mihevitra fa ny lalàna momba ny fanararaotana ara-pitsaboana any UAE dia tokony halalinina lalina ary iharan'ny famonoana azy noho ny lafiny ara-kolontsaina manokana amin'ny firenena iray manontolo.
Rehefa mifidy raharaha momba ny fitsaboana amin'ny fangalarana ny raharaha na manambara ny tsy firaharahiana ara-pitsaboana any Dubai na any UAE
Raha mahaliana anao raha tokony hametraka tranga manoloana ny tsy fanaovan'ny dokotera anao taorian'ny naharatrana azy, voalohany indrindra, tokony ho fantatrao tsara hoe iza amin'ireo raharaha ara-pitsaboana dia azo raisina ho toy ny tsy fanararaotana. Raha dinihina ny famaritana ny tsy fanararaotana ara-pitsaboana voalaza etsy ambony, dia ilaina ny mahafantatra hoe inona ny tsy fitandremana sy ny ratra na fahasimbana alohan'ny hametrahany tranga amin'ny dokotera.
Ny voalohany dia mifandraika amin'ireo tranga ireo rehefa nanao fahadisoana ny aretinao ny dokotera, na tsy mahavita manome fanafody mety na fitsaboana takiana amin'ny aretinao. Ny vato fehizoro amin'ireto tranga ireto dia ny fenitry ny fikarakarana, midika hoe fomba na fomba iray, eken'ny matihanina hafa ao an-tsaha mba hitsaboana ny marary azy ireo ao anatin'ny toe-javatra mitovy na mitovy. Rehefa miahiahy ianao na izany no tena izy na tsia, ny tena zava-dehibe dia ny manaporofo fa nandika ny fenitra mifandraika amin'ny olanao ara-pitsaboana ny dokotera. Rehefa avy nanaporofo izany ianao dia afaka mandeha mora ary manao fitakiana fanararaotana amin'ny mpitsabo anao.
Ny faharoa kosa manondro an'ireo hadisoana ara-pitsaboana ireo, izay niteraka fahavoazana na naharatsy anao. Raha manana porofo ampy ianao hanohanana ny fitakianao ary asehoy fa miharatsy ny toe-pahasalamanao aorian'ny dokotera ampiharina amin'ny dokotera, na naratra ianao taorian'ny fandalovan'ny dokotera anao dia afaka mitodika any orinasam-pitsarana manampahaizana manokana momba ny fitsabo ara-pitsaboana ary mametraka fitoriana amin'ny dokotera.
Fantaro fa amin'ny toe-javatra toy izany, dia tokony ho farafaharatsiny, ny vavolombelona manam-pahaizana iray, izay hanambara fa ny ratrao dia vokatry ny fahadisoana nataon'ny dokotera anao. Ireo vavolombelona ara-pitsaboana voalaza etsy ambony dia matetika no hita ao amin'ireo mpitsabo hafa na dokotera hafa voakasik'izany.
Zava-dehibe ho Fantatra ny onitra ara-pitsaboana
Isaky ny tratra ianao amin'ny toe-javatra iray, rehefa tsy misy na inona na inona atao, fa apetraho amin'ny mpitsabo any UAE, Dubai ny raharaha momba ny fanafody mpitsabo, tokony hampahafantarina tsara ianao momba ny fifampiraharahana DIAC (Center International Arbitration Center) sy ny fiantohana ny famonoana mpitsabo amin'ny fifandraisana amin'ny tsy fahasalamana ara-pitsaboana any UAE.
DIAC ny fifandanjana dia andrim-panjakana maharitra sy tsy mitady tombontsoa antsoina hoe hanome tolotra sy serivisy fanatanjahantena avo lenta sy azo tanterahina ho an'ireo vondron-draharaha iraisam-pirenena sy rezionaly. Ny DIAC dia manolotra serivisy amin'ny fifandinihana toy izany, izay misy ny olana mifandray amin'ny alàlan'ny fitsarana, ny fanendrena mpanelanelana, ny fifanolanana ara-barotra, ny toeram-pitsarana, ny mpifaninana ary ny sarany mpanelanelana.
Rehefa miresaka momba ny olana ara-pahasalamana hita any amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe ao Dubai, dia tokony ho fantatrao fa ny fitarainana ara-pitsaboana natao tamin'ireo mpitsabo sy mpanome tolotra ara-pahasalamana dia fehezin'ny Dubai Health Authority. Ity farany dia naorina tamin'ny Jona 2007. Ireo fitarainana ara-pitsaboana voalaza etsy ambony ireo dia karakarain'ny Departemantan'ny Fitsipika Ara-pahasalamana ao amin'ny Manampahefana Momba ny Fahasalamana Dubai, izay antsoina hamahana ny olana rehetra amin'ny alàlan'ny lalàna. Ny Departemanta dia vonona ny hanadihady ireo karazana fitarainana rehetra ary hanapa-kevitra raha meloka amin'ny fitsaboana tsy ara-dalàna na tsia ity mpiasan'ny fahasalamana ity.
Eto dia tena ilaina ny mahafantatra ireo tranga ireo rehefa tsy handray andraikitra ara-dalàna ny matihanina amin'ny fitsaboana. Ireto izy ireo:
Rehefa hita fa diso ny marary noho ny fahasimbana.
Rehefa ampiharina ny fomba fitsaboana manokana ny matihanina ara-pahasalamana, izay tsy mitovy amin'ny ekena amin'ny ankapobeny, fa noho ny foto-pitsaboana ekena amin'ny ankapobeny.
Rehefa fantatra ny tsimokaretina sy ny lafiny momba ny fitsaboana amin'ny ankapobeny.
Raha momba ny fiantohana ara-pahasalamana momba ny fitsaboana, ny farany dia misy ifandraisany amin'ny fandrakofam-pitsaboana, ny asa sy ny tsy fahampian'ny mpitsabo na ny mpitsabo, ao anatin'izany ny fiantohana ny fiantohana arak'asa, ny fiantohana ny mpitsabo arak'asa, ary ny fiantohana ara-pahasalamana momba ny fitsaboana. Ny ankamaroan'ny polike ampiharina amin'ity lafiny ity dia hita miaraka amin'ny teboka mitaky valiny. Ity karazana fandrakofana farany ity dia matetika miaraka amin'ny tranga mifototra amin'ny tranga mitranga.
Ny governemanta Arabo Emirates Arabo dia mitaky ny mpitsabo tsirairay sy ny mpitsabo rehetra amin'ny sehatry ny fitsaboana ho fiantohana fitsaboana. Ny karazana fiantohana dia mikendry ny fiarovana ny mpitsabo voarohirohy amin'ny sehatra ara-pitsaboana manohitra ny raharaha napetraka.
Ny fonony toy izany dia azo takiana amin'ny ampahany amin'ny manampahefana mifehy. Mety ho azon'ireo mpitsabo amin'ny alàlan'ny isam-batan’olona izy ireo, na amin'ny maha mpiasa azy. Noho izany, misy karazana politika roa momba an'io lohahevitra io - Politikan'ny Practitioner an'ny tsirairay sy ny politika Entity Med Mal. Tamin'ny tranga teo aloha, ny fandrakofana omena dia tsy dia lehibe toy ilay iray mifandray amin'ny Fiantohana Entity. Amin'ity tranga farany ity dia mazàna ny fandraisana andraikitra (izay miasa ny mpitsabo) izay manome ny fiantohana. Noho izany, misy karazana rindranasa roa misy ny fampiharana manokana an'ny olona tsirairay sy ny fampiharana Entity Med Mal.
Araka ny hitanao, miaraka amin'ny orinasam-piantohana mpitsara vonjy taitra, dia afaka mahazo fiarovana tsara kokoa ianao amin'ny fanoherana ataon'ny antoko fahatelo ho an'ny fanararaotana ara-pitsaboana ao UAE. Ataovy azo antoka fa manana fandaniana ara-dalàna sy sarany voarindra koa ianao.
Hevitra 3 momba ny “Zava-dehibe ny antsipiriany! Fanararaotana ara-pahasalamana any Dubai, UAE ”
Pingback: Mitodika any amin'ny Fitsarana UAE Ho an'ny Fitsapana fitsaboana ho anao: mpisolovava mpahay lalàna any Dubai | mpisolovava ao UAE sy Advocates Dubai
01/11/2016 amin'ny 11:07 maraina
Andriamatoa tompoko, azafady noho ny fahadisoana nataon'ny dokotera nandritra ny fandidiana hydrocele 2011 nefa tsy nahazo tatitra satria ny dokotera hafa tsy nanome ahy afa-tsy am-bava afaka manampy ahy handany vola be mba hananana zaza faharoa nefa tsy nahomby
05/25/2021 amin'ny 12:47 maraina
Olana amin'ny nify
Fahendrena malpractice mpitsabo nify fanesorana nify tsy nahomby simba bakteria nerveuse tarehy tarehy, tsy misy fahatsapana ho matimaty ambany molotra ankavanana, fahatsapana tingling indraindray mandoro takolaka manify molotra mavo mavo ary maro ny olana hafa simba nerveuse nerminal neurologia, nitatitra ny hopitaly rehetra, dokotera, minisiteran'ny fahasalamana sy faktiora. Mandany fitsaboana tsy feno 40000dh aho izao